सुदर्शन भन्छन्, ‘श्याम भन्दा रेखा ट्यालेण्टेड’ « THULOPARDA.COM: Entertainment News Portal From Nepal
सुदर्शन भन्छन्, ‘श्याम भन्दा रेखा ट्यालेण्टेड’
दुवै हात गुमाएका ‘हिम्मतवाली’ डेब्यु नायक सुदर्शन गौतमले रेखा थापा उत्कृष्ट नायिका मात्र नभएर उत्कृष्ट निर्देशक पनि रहेको बताएका छन् ।
बुधबार पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै उनले हिम्मतवालीको शुटिङ समयलाई स्मरण गरे । निर्देशक श्याम भट्टराई र रेखाविच विबाद भएपछि ‘हिम्मतवाली’ को निर्देशन रेखाले गरिन् । ‘मलाई शुरुका दुई दिन श्यामजीसँग काम गर्दा निकै असहज भयो, रेखाले गर्न थालेपछि सहज भएको हो’, उनले भने । ‘म चलचित्र क्षेत्रमा डेब्यु कलाकार थिए र मलाई अभिनय गर्न असहज हुने दृश्यहरुमा रेखाजीले अर्को विकल्प निकाल्नु हुन्थ्यो’, उनी भन्दै थिए- ‘त्यसैले म रेखा जीलाई एउटा राम्रो निर्देशक पनि मान्छु ।’ निर्देशक भट्टराई भन्दा पनि रेखाको निर्देशन आफुलाई उत्कृष्ट लागेको पनि उनले सुनाए ।
तपाई र रेखाजीको प्रेम सम्बन्धको हल्ला छ नि बजारमा, खास के हो ? भन्ने प्रश्नमा उनले आफुहरु एक असल साथी मात्र रहेको बताए । असल साथीको सम्बन्ध विहेमा परिणत हुन पनि सक्छ भन्ने अर्को प्रश्नमा उनले हास्दै भने– ‘हुन सक्छ, भन्न सकिदैन् भविष्यका कुरा । ’
असोज ०५ गते फुलपातीको दिनबाट रिलिज हुन लागेको बहुप्रतिक्षित चलचित्र ‘हिम्मतवाली’ एक नारीप्रधान चलचित्र भनिएको छ । ‘अपाङ्गता असक्षमता होइन्’ भन्ने सन्देश पनि यस चलचित्रले दिनेछ भन्ने आशा गरेको सुर्दशनले सुनाए । ‘यसका लागी मैले सक्दो मिहेनत गरेको छु, मलाई लाग्छ तपाईहरुले चलचित्र हेर्दै जाँदा कहीकतै पनि मलाई अपाङ्ग जस्तो महसुस गर्नुहुने छैन् । ’
यता चलचित्रकी निर्माता, निर्देशक तथा नायिका रेखाले आफुलाई ‘स्टन्ट हिरोइन’ र ‘पुरुष सलमान खान’ को उपनाम पाउँदा खुशी लाग्ने बताइन् । ‘मलाई रोएको, पिडित भएको पात्रभन्दा पनि यस्तो पात्र नै भएको मनपर्छ’, उनले सुनाइन् ।
तपाई रियल लाइफमा पनि ‘हिम्मतवाली’ की रिल लाइफमा मात्र ? भन्ने प्रश्नमा उनले भनिन्– ‘त्यो त तपाईहरुले मुल्यांकन गर्ने हो नि । ’
‘हिम्मतवाली’ ले नेपाली समाजमा एउटा राम्रो सन्देश दिने कुरामा आफु विश्वस्त रहेको पनि रेखाले बताइन् । ‘सुदर्शनको अलौकिक अभिनय तपाईले चलचित्रमा देख्न सक्नुहुनेछ’, उनले थपिन् ।